गर्भवती महिलाले शिशु जन्मिनुुअघि के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? थाहा पाई राखौँ – Makalukhabar.com
रानीपोखरीको मन्दिरमा राखियो गजुर
सहमहामन्त्री वा कर्णाली प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी दिने नेता शाहीको तयारी
निशाश मोटर्सले ल्यायो एभेन्जर १६० स्ट्रिट एबिएस माेटरसाइकल (विशेषतासहित)
गर्भवती महिलाले शिशु जन्मिनुुअघि के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? थाहा पाई राखौँ
महिलाले जीवनमा थुप्रै शारीरिक तथा मानसिक चुनौती पार गरेकी हुन्छिन् । यिनै चुनौतीमध्ये गर्भावस्था पनि एक हो । महिलाले आफ्नो कोखमा शिशुलाई हुर्काउने यो अवस्था निकै संवेदनशील मानिन्छ । यसैले यो अवधिमा गर्भवतीको रेखदेख र आहारविहारमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । खास गरी गर्भावस्थामा पोषणमा कमी भए जन्मिने शिशुमा पनि असर पर्ने भएकाले खानपानमा उचित ध्यान दिनुपर्छ । गर्भावस्थाको अवधि ३७ हप्ताको हुन्छ । यसलाई तीन वटा त्रैमासमा विभाजन गरिएको छ ।
– पहिलो त्रैमास : बसेको पहिलो हप्तादेखि १२औं हप्तासम्म
– दोस्रो त्रैमास :१३औं हप्तादेखि २८औं हप्तासम्म
– तेस्रो त्रैमास : २९औं हप्तादेखि ३७औं हप्तासम्म
गर्भावस्थामा शरीरमा हुने परिवर्तन
-विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार गर्भावस्थामा पाचन प्रणालीमा विभिन्न समस्या देखा पर्छ । पाचन प्रक्रियामा चाहिने विभिन्न इन्जाइमको उत्पादनमा गडबडी आउने भएकाले असहजता महसुस हुनु सामान्य मानिन्छ ।
-यो समयमा शरीरलाई अत्यावश्यक पर्ने विभिन्न पोषक तत्त्व जस्तैः क्याल्सियम, आइरन, भिटामिन ‘बी’ १२ र साथै अन्य तत्वहरु सोस्ने प्रक्रिया बढ्छ । यसका साथै शरीरबाट विभिन्न हानिकारक तत्त्व जस्तैः क्रियाटिनाइन, युरिया, युरिक एसिड आदि हट्ने क्रम बढ्छ ।
-गर्भावस्थाको मध्य समयमा शरीरबाट पानीको निष्कासन तुलनात्मक रूपमा बढ्छ र गर्भावस्था परिपक्व हुँदै जाँदा यो दर कम हुन्छ । एमिनो एसिड र आयोडिन पिसाबको माध्यमबाट निस्किने कार्य बढ्छ । तर, क्याल्सियम र भिटामिन बी को निष्कासनमा भने कमी आउँछ ।
-रगतको सम्मिश्रणमा पनि विभिन्न परिवर्तन देखा पर्छन्, जसअन्तर्गत प्लाज्माको आयतन ५० प्रतिशतले र रातो रक्तकोष २० प्रतिशतले बढ्छ । तर, रगतमा हेमोग्लोबिन, भिटामिन ए र एस्कर्भिक अम्लको मात्रामा भने कमी आउँछ । यसका साथै रगतमा फेराटिन, टोकोफेरोल र कोलेस्टेरोलको मात्रा बढ्छ ।
-गर्भावस्थामा महिलाको शरीरमा पानीको मात्रा ७ लिटरसम्म बढ्छ । पर्याप्त मात्रामा पोषिला खानेकुरा खाएका स्वस्थ गर्भवतीको तौल ११ देखि १३ किलोसम्म बढ्न सक्छ ।
गर्भावस्थामा पोषणमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
-गर्भावस्थामा महिलाले आफ्नो मात्र नभई कोखमा हुर्किरहेको नयाँ जीवनको पनि विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । खास गरी यो अवधिमा सन्तुलित भोजन र थप पौष्टिक खानेकुरामा जोड दिनुपर्छ । किनकि आमाले खाएको खानाले नै गर्भमा रहेको बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकासको निर्धारण गर्छ ।
-गर्भावस्थामा शरीरमा दैनिक चाहिने पोषक तत्वको माग बढ्ने भएकाले गर्भवतीलाई थप पोषणको आवश्यकता पर्छ । गर्भवतीको शरीरमा आउने वृद्धि, भ्रुणको तीव्र विकास र शरीरमा विभिन्न मातृ तन्तुहरुको विकासका साथै स्तनको आकारमा हुने वृद्धिका कारण अतिरिक्त पोषण जरुरी हुन्छ । त्यसैले यो अवधिमा दैनिक थप ३५० किलो क्यालोरी र ८२।२ ग्रामका दरले प्रोटिन चाहिन्छ ।
-त्यसका लागि दैनिक भोजनमा पर्याप्त मात्रामा पोषिला र प्रोटिनयुक्त खानेकुरा जस्तैः माछा, मासु, अण्डा, दूध, दही, गेडागुडी, दाल आदि समावेश गर्नुपर्छ ।
-गर्भवतीलाई सामान्य अवस्थामा भन्दा थप मात्रामा खनिजको आवश्यकता पनि उत्तिकै पर्छ । भ्रुणमा हुने हड्डीको विकासका लागि क्याल्सियम, फस्फोरस र भिटामिन ‘डी’ को आपूर्ति गराउन क्याल्सियमयुक्त खानेकुरा दूध, दहीका साथै हरिया सागपात र फलफुल प्रशस्त खानुपर्छ । यसका साथै आइरन, सोडियम, आयोडिन, जिन्क र भिटामिनहरु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
-गर्भवती भएको बेला रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रामा कमी आउँछ । यसैले पोषिला खानेकुराका साथै चिकित्सकको सल्लाह अनुसार थप आइरन चक्की पनि खानुपर्छ । शिशुलाई ‘स्पाइना बाइफिडा’ हुन नदिन र उसको मानसिक विकासका दैनिक रूपमा ४ सय माइक्रोग्राम डाएटरी फोलेट (फोलिक एसिड) खानुपर्छ । फोलिक एसिड पाइने खानेकुरा हरिया सागसब्जी, गेडागुडी, सुन्तला, भटमास, गहुँ, बदाम, केराउ आदि हुन् ।
-पाठेघरमा भ्रुणको तीव्र विकास हुने क्रममा तल्लो आन्द्रामा दबाब सिर्जना गर्ने भएकाले कब्जियतको समस्या देखापर्छ । त्यसैले गर्भवतीले फाइबरयुक्त खानेकुरामा जोड दिनुपर्छ । हरिया सागसब्जी, गहुँको पिठो, केरा, अनार, अम्बा, अङ्गुर, अमला जस्ता फलफुलमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ । पोषणमा ध्यान दिनुका साथै गर्भवतीले ३७औं हप्तासम्म नै स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित रूपमा परामर्श लिइरहनुपर्छ ।
( कार्कीले न्युट्रिसन एन्ड डाइटेटिक्समा बिएससी गरेकी हुन्)
बेलौरीकाे बैंक अफ काठमाडाैं र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक एक साता बन्द